I-CR7 izovula amahhotela amasha eMarrakech, eMadrid naseNew York | Izindaba Zokuhamba
I-CR7 izovula amahhotela amasha eMarrakech, eMadrid naseNew York
Maria | | Indawo yokuhlala, Izaziso
Uma kunomdlalo ophakanyiselwe esigabeni semicimbi yomhlaba nezigidi zabalandeli emhlabeni wonke, kuyibhola likanobhutshuzwayo. Amakilabhu nabadlali bebhola lezinyawo bavusa imizwa yokuthi akumangalisi ukuthi amahhotela anengqikithi anikezelwe inkosi yezemidlalo aze avuleka.
Yebo, isikhashana manje enye yezinkanyezi zebhola laseYurophu, UCristiano Ronaldo, ujoyine lo mkhuba futhi uvule amahhotela amaningana anezemidlalo, impilo enempilo nesimo sakhe njengesihloko esikhulu.
ILisbon, Funchal, Madrid, New York futhi manje iMarrakech bajoyina uhlu lwamadolobha aklanywe yihhotela i-CR7. Unjani ngamunye wabo?
3 ENew York
6 Anjani amahhotela e-CR7?
Ukwakhiwa kwehhotela lesihlanu likaCristiano Ronaldo sekuqalile futhi ukuvulwa kwalo kuhlelelwe u-2019 ngaphansi kwegama lePestana CR7 Marrakech. Cishe izolandela umugqa ofanayo namanye amahhotela ayo kodwa ngokuthinta isitayela saseMorocco kwazise uthando umdlali webhola analo ngezwe lase-Afrika lwaziwa kahle.
IPestana CR7 Marrakech izotholakala ku-avenue M yedolobha, kwenye yezindawo ezikhetheke kakhulu ezizungezwe imidwebo yobuciko, izitolo zikanokusho, izindawo zokudlela ezihamba phambili nezingadi ezinhle.
Ihhotela elibhekiswe ngumdlali webhola lezinyawo eMadrid cishe lizovula iminyango yalo kulo nyaka futhi lizofakwa kwiMeya yePlaza. Intengo emaphakathi izoba ngama-euro angama-200 ubusuku ngabunye futhi izoba namakamelo angama-87, okuyi-12 awo kuzoba amasudi.
Njengokulangazelela, umqondo bekuwukuthi kuvulwe ihhotela lokuqala i-CR7 eMadrid, kodwa ngenxa yobunzima obuthile basemadolobheni nokubambezeleka kwezokuphatha, ukuvulwa kwesikhungo enhlokodolobha yaseSpain bekufanele kuhlehliswe.
I-Pestana CR2018 New York ne-Pestana NY East Side ne-Pestana Newark kuhlelwe ukuthi zivulwe e-United States ngo-7., ezokwengeza amakamelo amasha angaphezu kuka-380 ezweni.
Bobabili abase-United States naseMadrid bazoba ngamahhotela ngaphansi komkhiqizo weqoqo, okuhloswe ngalo ukuba izethameli ezikhethekile ezinesitayela samanje nesasemadolobheni.
NgePestana CR7 Lisboa Lifestyle Hotels namanye amaphrojekthi wokungenisa izihambi sifuna ukuthola iBaixa ekuwohlokeni kwayo futhi siyenze izalwe kabusha.
Ihhotela lezitolo elinamakamelo angama-80 kanye ne-suite ye-deluxe enkabeni yedolobha, amamitha ambalwa ukusuka embukisweni wePraça do Comércio. Umhlobiso wamakamelo uyasebenza futhi ubuncane kodwa izinkomba zemidlalo ziyaqhubeka. Hhayi kuphela ngomuntu okhona yonke indawo kaCristiano Ronaldo kodwa nangokuba khona kwezingqwembe zokuvuna ubuqhawe ekwamukelweni kwehhotela, ibhola letafula endaweni yokwamukela izivakashi noma izikrini ezinkulu endaweni yokucima ukoma ukuze ungaphuthelwa ngumdlalo.
Futhi ehhotela elikhuthaza impilo enempilo, awukwazi ukuphuthelwa yindawo yokuzivocavoca lapho amakhasimende angakwazi ukuzivocavoca futhi athuthukise isimo sawo somzimba. sibonga ukunakwa komuntu okunikezwa yihhotela ngezinhlelo ezifanele zokuzivocavoca umuntu ngamunye.
Igama layo yiPestana CR7 Funchal futhi itholakala enhlokodolobha yaseMadeira esakhiweni esibizayo esibomvu esibheke olwandle esinechibi lokubhukuda, i-spa, ukufinyelela mahhala eMnyuziyamu we-CR7 eFunchal kanye nokwenzeka kokusebenzisa uhlelo olukhethekile lokuqeqesha ejimini yalo yangaphandle eyenzelwe umdlali webhola uqobo.
Ngaphakathi kwePestana CR7 Funchal kunezigaba ezintathu zamagumbi ahlanganisa ukwakheka kwanamuhla nezemidlalo. Banazo zonke izinhlobo zokunethezeka, bavinjelwe umsindo futhi batholakala ngamadijithali ngomhubhe wotshani wokuzikhumbuza okhumbuza inkundla yezemidlalo yebhola. Emnyango ngamunye kunesithombe esikhulu sikaRonaldo kanti nasemakamelweni okulala kunemidwebo yempilo yakhe.
Anjani amahhotela e-CR7?
Amahhotela e-CR7 angumphumela wobumbano phakathi kwenkanyezi yesiPutukezi nePestana Hotels & Resorts Group, ebhekele ukuphathwa kokusebenza kwalezi zakhiwo. Iphrofayili yeklayenti lamahhotela kaCristiano Ronaldo ngabantu abasha abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-35 abanentshisekelo kwezobuchwepheshe, impilo enempilo nempilo yezenhlalo.
Amanani aphakathi kuka-250 no-1.250 euros ubusuku ngabunye kuya ngegumbi. Zingabonakala njengezintengo ezimba eqolo, kepha lawa ngamahhotela ezinkanyezi ezi-5 afakwe zonke izinhlobo zokunethezeka nobuchwepheshe bamuva. Kodwa-ke, kukhona labo abangabazayo ukuthi kunentsha eningi engakwazi ukukhokha lezi zintengo lapho ijwayele ukukhetha ezokuvakasha ezingabizi kakhulu.
Kodwa-ke, lo mkhiqizo uhlela ukuphinda kabili inani lamahhotela eminyakeni emihlanu. Ukuvulwa okulandelayo kunamahemuhemu okuba eMilan nase-Ibiza kanye nase-Asia naseMiddle East ngoba uCristiano Ronaldo uthandwa kakhulu lapho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Indawo yokuhlala » I-CR7 izovula amahhotela amasha eMarrakech, eMadrid naseNew York
ICaral, ukuvakasha kwemivubukulo ePeru
Izindawo eziyi-12 okufanele uzigweme ngo-2018 ngokwe-CNN